मेगा बैंकको हेटौंडा शाखामा २९ लाखको काण्ड ! — Bhugolnews
मिटर ब्याजको मोहमा यसरी फसे ब्रान्च म्यानेजर
हेटौंडा । हेटौंडा उपमहागरपालिका वडा नं ४ मा रहेको मेगा बैंकका ब्रान्च म्यानेजर निरञ्जन देबकोटा आफ्नै कारण नराम्रो तरिकाले फसेका छन् । अर्काको धनमा आँखा लगाउन खोज्दा उनी त्यसरी फस्न पुगेका हुन् । उनी फस्नुको मुख्य कारण यस्तो छ ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिका चौकी टोलका बासिन्दा सुजन शाहीले चौकी टोलमै रहेको आफ्नो एक तले घर धितो राखेर गुहेश्वरी मर्चेन्टबाट २९ लाख ऋण निकालेका थिए । गुहेश्वरीको ऋण महंगो मानेका दिनेश नजिकै रहेको कैलाश विकाश बैंकमा ऋण लिन पुगे । उता कैलाशले गुहेश्वरीमा धितो राखेको घर आफ्नो बैंकमा धितो राखे ६० लाख ऋण दिने बचन दियो । त्यसपछि लगत्तै सुजन फेरि मेगा बैंकमा हानिए । उनले मेगामा पुगेर उक्त शाखाका म्यानेजर निरञ्जलाई सम्पूर्ण नालीवेली सुनाए ।
यो घटना हिजो बुधबारको हो । यो सबै घटना सुने लगत्तै मेगाका म्यानेजरले आजै तीन चार घण्टामा पैसा निकाल्न सक्ने हो भने गुहेश्वरीको ऋण चुक्त गर्न मेगाले २९ लाख रुपैयाँ दिन तयार रहेको बताए । ३/४ घण्टाको हिसावले ४५ हजार निराजनले मिटर ब्याज कमिसन लिने शर्तमा सुजनलाई पैसा दिएको स्रोतले बतायो । जब, सुजन २९ लाख लिएर मेगा बैंकबाट बाहिरिए तत्पश्चात यतिबेलासम्म उनी कसैको सम्पर्कमा छैनन् । झोलामा २९ लाख पैसा राखेर स्कुटर लिएर काठमाडौंतिर लागेका उनी देउरालीमा आई अर्को एकजना साथी बोलाएर वियर खाएको बुझिएको छ । लगत्तै सुजनले उक्त वियर पार्टनरलाई आफ्नो स्कुटी जिम्मा लगाएर काठमाडौं फरार भएको स्रोतको दाबी छ । बैंक जस्तो प्रक्रियागत संस्थालाई धज्जी उडाएर आफ्नै बाउको सम्पत्ति ठानी बैंकको पैसा मिटरमा लगाई कमाउ धन्दामा लागेका म्यानेजरलाई बैंकले कस्तो पुरस्कार दिन्छ ? हेर्न बाँकी छ ।
साभार :3घुम्ती अनलाइनबाट